Anglikana Antananarivo - MG
PAROASY RENY : KATEDRALY St LAURENT AMBOHIMANORO
Ny katedraly Santa Laurent Ambohimanoro no katedraly voalohany namboarin'ny Eklesia Episkopaly Malagasy. Mitoetra ambonitoerana eo amin'ny vohitr'Ambohimanoro, eo akaikin'ny zaridainan'Andohalo. Izy ankehitriny no katedralin'ny diosesin'Antananarivo ary isan'ny vakoka ara-tantara (patimoine historique nationale) eto Madagasikara.
Ny tantaran'ny Katedraly dia tsy afaka misaraka amin'ny an'ny Fiangonana Anglikana eto Madagasikara. Ny asa fitoriana nataon'ny fiangonana Anglikana dia nanomboka tamin'ny fanjakan'i Radama II, tamin'ny alalan'ny Society for the Propagation of the Gospel (SPG) ary ny Church Missionary Society (CMS). Afaka taona vitsivitsy taorian'izay dia nohamasinina ny Evekan'i Madagasikara voalohany dia Mgr Robert Kestell Cornish izay tonga tao Toamasina tamin'ny Oktobtra 1874. Rehefa tonga tao Antananarivo niaraka tamin'ny misionera hafa izay dia nandalo namangy ny mpanjaka Ranavalona II ary nanolotra Baiboly sy boky fivavahana izay fanomezana avy any amin'ny Arsevekan'i Canterbury Mgr Archibal Tait. Nisy fiangonana anglikana kely tao Ambatomasina, teo akaikin'ny toerana misy ny Katedraly Ankehitriny. Noho ny fitomboan'ny isan'ny kristiana dia tsy antonona intsony ny trano fiangonana, ka tapaka ny hevitra ny amin'ny fanorenana trano fiangonana lehibe kokoa. Nanomboka tamin'ny 13 Septambra 1883 ny fanorenana azy izay nametrahan'ny Praiminisitra Rainilaiarivony ny vato fototra notronin'ny Eveka. Rehefa vita ny Katedraly tamin'ny 17 Août 1889 dia notanterahana ny fanokanana izay notronin'ny Praiminisitra ary ny vice-consul Anglisy tamin'izany fotoana W.Clayton niaraka tamin'ny manamboninahitra hafa Malagasy sy vahiny.
Ny diosesin’Antananarivo dia isan’ny diosesy 3 voalohany teto Madagasikara. Mandrakotra ny faritanin’Antananarivo iray manontolo miatomboka any Anosibe An’Ala ka hatrany Antsirabe ary miatomboka any Mahitsy ka hatrany Ambatondrazaka.
Ny katedraly St Laurent Ambohimanoro no fiangonana renin’ny diosesy.
Ivondronan’ny paroasy hatrany amin’ny 50 isa ary ikambanan’ny sahan’asa sy herivelona 20.
Ny Eveka Mgr RANARIVELO Samoela Jaona no mitondra ny diosesy nanomboka ny taona 2008.
Ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Diosesy
Rev. RAKOTOMALALA Daniel